China Multi-axial Distal Femur kpochidoro efere ụlọ ọrụ na-emepụta | Shuangyang
1. ringdị mgbanaka multi-axial maka akụkụ dị nso nwere ike ịhazigharị mmụọ ozi ahụ iji gboo mkpa ụlọọgwụ;
2. Titanium ihe na teknụzụ nhazi dị elu;
3. Ọdịdị profaịlụ dị ala na-enyere aka belata mgbakasị anụ ahụ dị nro;
4. Mpo anodized;
5. Anatomical udi imewe;
6. Combi-onu nwere ike ịhọrọ ma kpochidoro ịghasa na cortex ịghasa;
Ọkpụkpụ orthopedic maka multi-axial distal femur kpochidoro efere kwesịrị ekwesị maka mgbaji femur.
Ejiri maka Φ5.0 mkpọchi mkpọchi, Φ4.5 cortex ịghasa, -6.5 kagbuo ịghasa, kwekọrọ na 5.0 usoro orthopedic ngwá set.
Multi-axial Distal Femur kpochidoro efere nkọwapụta
Aka ekpe 5 Oghere
Ihu 5 Oghere
Aka ekpe 7 Oghere
Nri 7 Oghere
Aka ekpe 9 Oghere
Nri 9 Oghere
Aka ekpe 11 Oghere
Nri 11 Oghere
Distal Femur kpochidoro efere
1. Titanium ihe onwunwe na elu nhazi technology;
2. Nkọwapụta profaịlụ dị ala na-enyere aka belata mgbakasị anụ ahụ dị nro;
3. Elu anodized;
4. Anatomical udi imewe;
5. Combi-onu nwere ike ịhọrọ ma kpochidoro ịghasa na cortex ịghasa;
Ngwunye ọgwụ maka distal femur kpochidoro efere adabara maka mgbaji femur.
Eji maka Φ5.0 kpochidoro ịghasa, Φ4.5 cortex ịghasa, -6.5 kagbuo ịghasa, ekwekọghị na 5.0 usoro ọgwụ ngwá set.
Distal Femur kpochidoro efere nkọwapụta
Mbadamba ọkpụkpụ Titanium dị ka etinyere orthopedic. A na-enye ya maka ụlọ ọrụ ahụike, ma na-ezube ịgwọ saịtị ndị mgbaji ọkpụkpụ nke ndị ọrịa n'okpuru ọrịa nchịkwa site n'aka ndị dọkịta a zụrụ azụ ma ọ bụ ndị nwere ahụmahụ nọ n'ime ụlọ ọrụ na-agbaso ihe ndị metụtara gburugburu.
Mkpọchi efere na ịghasa usoro nwere uru karịa ot ịghasa usoro. Enweghị mmekọrịta chiri anya a, ịgbatị kposara ga-adọta agba ọkpụkpụ n'akụkụ efere ahụ, na-ebute ngbanwe n'ọnọdụ nke ngalaba osseous na mmekọrịta ahụ. Usoro efere / usoro ntanetị chọrọ usoro mmezi nke efere na ọkpụkpụ dị n'okpuru. Mkpọchi efere / usoro ịghasa na-enye ụfọdụ uru karịa efere ndị ọzọ na nke a. Uru kachasị dị mkpa nwere ike ịbụ na ọ ga - abụ ihe na - adịghị mkpa ka efere ahụ kpọtụrụ ọkpụkpụ dị n'akụkụ niile. Ka a na-eme ka kposara ahụ sie ike, ha "kpọchiri" na efere e, si otú a na-eme ka akụkụ ndị ahụ kwụsie ike na-enweghị mkpa mpịakọta ọkpụkpụ ahụ na efere ahụ. Nke a na-eme ka ọ ghara ikwe omume maka ịghasa ịghasa ịgbanwe nbelata.
A na-eji efere titị nke kpochiri emechi site na titanium dị ọcha, ezubere iji mee ihe maka nwughari na nhazi nke Clavicle, aka na ọkpụkpụ na-adịghị mma ma ọ bụ nkwarụ ọkpụkpụ. A na-enye ngwaahịa a na nkwakọ ngwaahịa na-enweghị ọgwụ, were ya maka naanị iji ya.
Ngwakọta oghere ndị nwere oghere ndị nwere oghere na mkpakọ oghere na efere mkpọchi nwere ike iji maka mkpọchi na mkpakọ, nke dị mma maka dọkịta ịhọrọ. Obere njikọta dị n'etiti efere ọkpụkpụ na ọkpụkpụ na-ebelata mbibi nke ọbara ọbara nke mgbe ochie. Usoro mkpọchi / nkedo mkpọchi bụ na ha anaghị egbochi ọgbụgba ọkpụkpụ nke dị ka nnukwu efere, nke na-eme ka ala nke efere ahụ dị n'ọkpụkpụ ọkpụkpụ. .
E gosipụtara mkpọchi mkpọchi / sistemụ iji nye nkwado dị nkọ karịa usoro sistemụ na - enweghị mkpọchi.
Jiri mkpọchi efere / usoro ịghasa bụ na kposara nwere ike ghara ịtọghe na efere ahụ. Nke a pụtara na ọbụlagodi ma ọ bụrụ na etinyere ihe nkedo n'ime mgbaji mgbaji, ịtọpu nkedo agaghị eme. N'otu aka ahụ, ọ bụrụ na akpụkọtara ọkpụkpụ na efere ahụ, ihe nkedo mkpọchi agaghị agbasa n'oge usoro njiko aka na ọgwụgwọ. Ihe bara uru nke akụrụngwa a nke sistemụ mkpọchi / sistemụ bụ ihe mbelata nke nsogbu mkpali site na ịtọghe ngwaike. A maara na ngwaike rụrụ arụ na-agbasa mmeghachi omume mkpali na-akwalite ọrịa. Maka akụrụngwa ma ọ bụ sistemụ mkpọchi / mkpọchi ga-atọpụ, ịtọghe nke ịghasa na efere ma ọ bụ ịtọghe kposara niile site na ntinye ha ga-eme.
Nke gara aga: Multi-axial Proximal Femur kpochidoro efere
Osote: Multi-axial Medial Tibia Plateau Lokpọchi efere-5.0 usoro
Mkpọchi Maxillofacial Plate
Mkpọchi efere implants
Orthopedic ckingkpọchi efere
Titanium kpochidoro efere
Volar kpochidoro efere -Torx ụdị (Obere & La ...
3.0 3.5 4.5 Cortex ịghasa
Cannulated Mkpakọ ịghasa
Mkpọchi Mkpọchi Yume Humeral Y
Clavicle Reconstruction kpochidoro efere (Middle ...
Multi-axial Distal Mpụta Tibia kpochidoro efere -...